अमेरिकामा प्रचण्डलाई भिभिआईपी सम्मान, बिरलै हुने नो ईन्भेष्टिगेसन सर्कुलर जारी - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, चैत ५ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले भव्य स्वागत गरेका छन् ।
यसैबीच अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले नेपालका शिर्ष नेतृत्व तथा परिवर्तनका वाहक प्रचण्डलाई अमेरिकास्थित केण्डकी बस्दै आएका डा. तिलक श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डमाथी उजुरी गरेर नेपाल र नेपालीको बदनाम गरेको भन्दै श्रेष्ठप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।
डा. श्रेष्ठलाई देश विरोधी काम गर्न लाज लाग्नुपर्ने भन्दै बेअर्थको उजुरी तत्काल फिर्ता लिई नेपाल र नेपाली समक्ष माफी माग्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई अमेरिकामा ‘नो इन्भेष्टिगेशन’को सर्कुलर
प्रचण्डविरुद्ध श्रेष्ठले उजुरी गरेपछि अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ को सर्कुलर जारी गरेको छ । अमेरिकी दुतावास स्रोतका अनुसार अमेरिकाले विशेष रुपमा जारी गर्ने ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ भन्ने आन्तरिक सर्कुलर प्रचण्डका लागि जारी गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सबै इमान्दार हुनुपर्छ’
यस्तो सर्कुलर जारी भएपछि अमेरिकी सरकारका कुनै पनि प्रकारका निकायले कारवाही अगाडि बढाउन मिल्दैन । यस्तो सर्कुलर भारतीय उच्च नेताहरु सोनिया गान्धी, नरेन्द्र मोदीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरु अमेरिका भ्रमणमा जाने क्रममा जारी हुने गथ्र्याे । अमेरिका भ्रमणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी झमेला हटाउन विरलै मात्र यस्तो सर्कुलर जारी गरिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस अब ढुक्क हुनुस्, विकासले नयाँ गति लिन्छ– अध्यक्ष प्रचण्ड
प्रचण्डको भ्रमण अगाडि अमेरिकी राजदुत रेन्डीबेरीले प्रचण्ड निवासमै पुगेर भेट गरी अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै पनि झमेला नहुनेमा विश्वस्त पार्दै भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले विशिष्ट सम्मानका साथ स्वागत गर्ने बताएका थिए । लगत्तै दूताबासको सुरक्षा निकायले यस्तो खालको सर्कुलर जारी गरेको थियो । जुन इमिग्रेशन लगायत सुरक्षा सम्बद्ध अमेरिकी सरकारी निकायहरुमा पुगिसकेको छ ।